Sheekada Filimka Poster Boys: Shactiro aan laga daaleen iyo bandhig Classic ah u daawo filimkaan | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Filimka Poster Boys: Shactiro aan laga daaleen iyo bandhig Classic ah u daawo filimkaan
Sheekada Filimka Poster Boys: Shactiro aan laga daaleen iyo bandhig Classic ah u daawo filimkaan
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka shactirada badan Poster Boys waana filim fariin waaqici lah lagu dhex lifaaqay shactirada dhawaanahana aflaanta noocaas ah daawadayaasha si wacan ayay usoo dhaweyn jireen.
Jilaayaasha: Sunny Deol, Bobby Deol, Shreyas Talpade, Sonali Kulkarni, Samiksha Bhatnagar
Muxuu ku wanaagsan yahay Poster Boys: Bandhiga hogaamiyaasha oo Classic ah, shactiro aan laga daaleyn iyo qaabka sheekada loo dhigay
Muxuu ku liitaa Poster Boys: Wey adag tahay in la helo wax uu ku liitaan filimkaan bandhig ahaan iyo isku xir ahaan
Daawo ama ha daawanin Poster Boys: Kani waa filim mudan daawasho dhameestiran, hadii aadan daawanin waxaa ka shaleyn doontaa soo laabashada Bobby Deol sameeyay inay dadka kaaga sheekeeyaan!
Fariinta Filimka Poster Boys muhiimada ay leedahay: wuxuu ka hadlaa nolosha sedex shaqsi oo aad u kala duwan balse ka siman inay ku nool yihiin nolol dhex dhexaad ah.
Vinay Sharma (Bobby Deol) waa macalin iskuul oo maskiin ah sidoo kalena xaaskiisa dhib badan oo uu aad uga cabsado, Arjun Singh (Shreyas Talpade) waa wakiil ama dalaal aan hadal wax ku xalinin ee gacantiisa dadka kaga caana maalo halka Jagaavar Chaudhary (Sunny Deol) waa sarkaal hore oo ciidamada ka tirsanaan jiray balse hawl gab ah isagana reerkiisala nool laakiin marka uu xanaaqo sida foolkaanada camal ayuu u qarxaa.
Maalin maal maha ka mid ah tuulada ay ku nool yihiin sedexdaan Jangheti waxaa ka dhaceyso arin noloshooda oo dhan qaribeyso.
Jagavar Chaudhary (Sunny Deol) guurkii walaashiis lagu balansanaa gabi ahaanba wuu bur buraa, Arjun Singh (Shreyas Talpade) isagana arooskiisa ayaa bur buraayo sidoo kalena Vinay Sharma (Bobby Deol) isagana xaaskiisii xanaaqa badneyd ayaa soo racadeeneyso uguna hanjabeyso inay iska furi doonto!
Dhamaan sedexdaan shaqsi noloshooda waxaa qaribay hal arin oo ah in sawiradooda magaalada lagu dhajiyay ayagoo xayeysiis u sameenayaan nidaamka dhalmada loo yareeyo oo weliba hab casri ah in sedexdooda la dhufaaneeeyay ama laga xiray xididka minida ama shahda keeno ee bacriminta ka qayb qaato!
Sidaa darteed magaalada waxaa u galeyso inay yihiin sedex wiil ee kaartada ma dhaliiska lagu xayeysiinayay Poster Boys, laakiin qalad ay galeen ma jirto mana la socdaan waxa sidaan loogu galay ama dadka ka dambeeyo sheekadan!
Sedexdii dhibanaha ee noloshooda gurigooda iyo mida tuulada ay ka noqdeen tuko cambaar leh waxay bilaabayaan sidii ay ku cadeen lahaayeen inaysan qorshahaan dhalmada lagu yareenayo iyaga qayb ka ahayn laakiin sawiradooda si qaldan loo adeegsaday.
Sedexdii dadka ay naceen oo dhibaato bartanka kaga jiraan waxay gacanta ku dhigayaan sawir qaadihii sameeyay kaartada sawiradooda ee lagu xayeysiinayo joojinta tarmida.
Sawir qaadihii wuxuu u sheegaa in sheekadan ka dambeeyo sarkaal waaxda caafimaadka dowlada ka tirsan in sedexdooda lagu dhajiyo kaartada tarmida lagu joojinaayo.
Jagavar Chaudhary (Sunny Deol), Vinay Sharma (Bobby Deol) iyo Arjun Singh (Shreyas Talpade waxay wacad ku marayaan inay cadeeyaan wax qalad ah inaysan sameynin iyo sidii ay dowlada magdhow kaga heli lahaayeen sharafkoodii meel looga dhacay madaama laga dhigay ragg la dhufaaneeyay oo aan ka qayb qaadan karin dhanka tarmida ama wax soo saarka aadanaha!
Maxaa laga yiri isku xirka sheekada filimka Poster Boys: waxaa si rasmi ah sheekadiisa looga soo qaatay filimka Marathi-ga ah Poster Boys ee sanadii 2014 soo baxay laguan saleeyay sheeko dhacdo waaqici ama xaqiiqo ah.
Sheekada filimkaan waa midka iska salhan oo la fahmi karo laakiin qoorayaasha filimkaan Bunty Rathore iyo Paritosh Painter waxay qabteen shaqo ay abaal marin ku mudan yihiin qaabka ay fariinta u shigeen waxayna ka ilaaliyeen meelo dayacaad ama caajis leh in lagu arko.
Qaybta hore ee filimkaan qosolkaba ma ceshan kartid halka qaybta dambena qosolka uu sii soconaayo balse dareenka qiirada badan ayaa kasii dhigtay filimkaan mid aan daawashadiisa marnaba lagu caajiseen.
Mararka qaar qosol dartiis kursiga inaa ka dhacdid ayaa halis u gali doontaa waayo erey kasto oo filimkaan lagu hadlaayo ayaaba qosol socdo ah.
Director Shreyas Talpade waa kabtanka markabka si qurux badan oo xeelad ka buuxdo ayuu sheekada filimkaan isugu daba riday, run ahaantii aflaanta uu shactirada ku jili jiray wuxuu ka bartay qaabka sheekooyinka loo sameeyo, waa hubaal in Shreyas Talpade xirfadiisa cusub ee Director-nimo inuu darajo hor leh ku gaari doono!
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Inaba caadi ma ahan hogaamiyaasha filimkaan Sunny Deol, Bobby Deol iyo Shreyas Talpade sida ay doorarkooda ugu cadaalad faleen min bilaaw ilaa dhamaad si Classic ah ayay filimkaan u jileen.
Dhawaanahan Bollywood-ka ma aysan sameynin filim sedex atoore laga siiyo sedex door aan kala dhicin midaasna waxaa ku amaanan Shreyas Talpade oo Director-nimo cajiib badan lasoo baxay.
Bobby Deol wuu soo laabtay wuxuuna filimkaan ku leeyahay doorka ugu shactirada badan uguna hadal heynta badan madaama la siiyay hadalo dadka dhan ka qoslinaayo, si gaar ah doorkiisa maskiinimo qaabka uu u sameeya ayuu abaal marin ku mudan yahay waad iska hilmaami doontaa Bobby-gii murqaha weynaa ee dadka raganimada ku maquunin jiray.
Sunny Deol wuxuu lasoo baxay shactiro dheeraad iyo murugo farabadan doorkiisana si cajiib badan ayuu u jilay run ahaantii Sunny waa inuu badiyaa sameynta aflaan tayo wanaagsan si uu awoodiisii 90-maadkii usoo ceshto.
Shreyas Talpade doorkiisa ma ahan mid nagu cusub laakiin xeeladiisa iyo xarakaadkiisa dheeriga ah ayuu labada Deol cagta cagta ugu saaray waana shaqsiga sedexaad ee filimka Poster Boys loo daawan doono.
Sonali Kulkarni oo xaaska Sunny Deol ku jileyso iyadana door fiican oo ay dadka kusoo jiidan karto ayaa la siiyay sidoo kalena Samiksha Bhatnagar filimkan shactiradiisa si wacan ayay ka qayb qaadatay madaama ay jileyso Bobby Deol xaaskiisa xanaaqa badan.
Gunaanad: Poster Boys waa filim shactiro dhameestiran leh siweya daawadayaasha kaga heli doonaan waana mid ka mid ah aflaanta ugu sheekada fiican ee sanadkaan Bollywood-ka sameeyeen, sidoo kalena kooxda filima ka faaloodaan waxay Poster Boys siiyeeen 3.5/5 taasi oo ka dhigan sedex dhibcood iyo bar uu helay aadna loo amaanay fariintiisa shactirada badan.
Dhanka Boxoffice-ka Poster Boys waxaa caqabad ku noqon doonto inaan xayeysiis balaaran loo sameynin, tiyaataro badan la saareyn iyo loolanka oo ku badan midaas ganacsigiisa fagta hore ayay yareyn doonaa balse maal maha caadiga ah waa hubanti inuu sare u kici doono madaama fariintiisa wanaagsan dadka oo dhan isku sheeg sheegi doonaan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Poster Boys:
Waxaa Aqrisay 1,019
2 Responses to Sheekada Filimka Poster Boys: Shactiro aan laga daaleen iyo bandhig Classic ah u daawo filimkaan
Wow hanbalyo deols and shrey runtii filim TAYO fiican baysameyen waayo aflantii bollywood ku waysii daciifayan ,,akshay iyo ajay baa layre baxsaday mooge labadii ilama Khan ,,Salman iyo sharu flop bayku aftaxeen ,, lknse sunny deol baa dib usoo celunaya awoodisii .
woow eshcalaa film runtii waa loo bogi doonaa filmkan and bogser